On 12/26/2016 (IST)
Shabakada aduunka ugu weyn ee qorta FAKE NEWS waa http://abcnews.com.co taasoo isticmaasha astaanta ama logo ay leedahay warbaahinta caalamiga ah ee ABC,dad aad u tira badan ayaa aqriya isla markaana run u qaata.
Iminka arimaha FAKE NEWS waxay saameyn ku yeesheen doorashada SOMALILAND ee 2017,iyadoo baraha SOCIAL MEDIA la soo dhigo warar aan waxba ka jirin iyo sawirro PHOTOSHOP ah oo si aan professional ahayn laysugu dhejiyay.
Jaraa'idka THE STAR oo isla markaa lagu daabaco ONLINE waa mid TABLOID ah oo inta badan qoraalada ay soo daabacaan aan ahayn kuwa la aamino karo ama ay soo qoreen PROFESSIONAL JOURNALIST,waxaa bishii December 2016 lagu soo daabacay qoraal TITLE looga dhigay:
Waxaa kale oo la soo raaciyay sawirro kala duwan oo qaarkood si PHOTOSHOP ah laysugu soo dhejiyay.
Ugu horeyn bal aan isla eegno sawirrada la yiri waxaa wada galay labada mas'uul ee CIRRO iyo SHARMAARKE.
Si fiican indhaha ugu qabo qaabk uu CIRRO u fadhiyo waa UNNATRUAL ama si caadi ah oo qof-qof kale la hadlaya uma fadhiyo,tan kale oo xaqiijineysa 100% waa midabyada CAD ee PHOTOSHOPKA lagu sameeyay oo shaqsigii sameeyay ilaaway SMOOTHING PHOTOSHOP BRUSH oo ka dhigi lahaa mid la aamini karo.
Iminka eeg sawirka hoose oo ah midka SAXA ah oo ay isla fadhiyaan Mudanayaasha CIRRO iyo XIRSI.
Sawirka dusha waxaa laga jaray Mudane XIRSI,hadii aad eegtid qaabka uu u fadhiyo CIRRO iyo meesha uu ku sugan yahay waxaa laysku dayey in PHOTOSHOP lagu bedelo markii la yiri shir albaabada u xiran ayuu SHARMAARKE la qaatay.
Waxaa ka sii daran sawirrada jaraa'idka THE STAR ee KENYA u isticmaalay qoraalka uu yiri, wuxuu ahaa kulankii CIRRO iyo SHARMAARKE
Bal si fiican u eeg dharka ay xiran yihiin iyo sawirkii laysku dhejiyay ee CIRRO iyo SHARMAARKE.
Qoraalka BEEN ABUURKA ah waxaa ka sii daran sida dad qaarkood oo mas'uuliyiin ah ay u aamineen,taasoo ku tuseysa sida FAKE NEWS qof walba uu u rumeysan karo,daawo ENG FAYSAL CALI WARAABE oo arintaa ka hadlaya.
BEENTA sida ay GOOGLE ugu faafto isla markaana dadka maan gaabka ah ay u aaminaan eeg sawirka hoose:
Waxaa kale oo shabakada SOLAPORTAL soo xaqiijisay in qoraaga maqaalkan been abuurka ah ee la yiraahdo LEWIS NYAUNDI uu yahay shaqsi FREE LANCE ah oo ku shaqeysta qaabka loo yaqaan PAY-AS YOU GO oo wixii lacag lagu siiyo waxay ahaadaanba qoraal ka soo qora
Shabakada SOLAPORTAL waxay isku dayday in bartiisa TWITTERKA ay kala xiriirto,dhowr saacadood ka dibna wuu masaxay ama DELETE ku sameeyay TWITTER ACCOUNT,eeg sawirka hoose:
Ka dib qoraalkii BEEN ABUURKA ahaa hawada ayaa laga saaray,iyadoon wax raali gelin ah ka bixin,eeg LINKIGA iyo SAWIRKA hoose:
LINKIGA laga saaray shabakada THE STAR HALKAN RIIX
Shabakada SOLAPORTAL.COM waxaa u suura gashay in ay si fudud ku helaan QORAALKA laga saaray,inagoo isticmaalnay GOOGLE CACHE oo ah saanta qoraalada u keydsan GOOGLE ee aan la tirtiri karin,eeg sawirka iyo LINKIGA hoose:
LINKIGA GOOGLE CACHE ee shabakada THE STAR HALKAN RIIX
LEWIS NYAUNDI (Shaqsiga lacagta ku qaatay qoraalka been abuurka ah)
Baaritaan aad u dheer ka dib shabakada SOLAPORTAL waxay soo ogaatay in aan waxba ka jirin kulankaan la yiri waxaa lagu gorfeeyay mustaqbalka SOMALIYA iyo SOMALILAND,waa FAKE NEWS oo iminka inta badan la isticmaalo waqtiyada ay dhici doonaan doorashooyin muhiim ah sida kuwa SOMALILAND iyo SOMALIYA,ma dhici kartaa Mr CIRRO iyo Mr SHARMAARKE in ay si lama filaan ah ugu kulmaan HOTEL Kenya ku yaala?TABCAN wax walba way dhici karaan,laakiin qoraalka THE STAR iyo warbaahinta kale ee SOMALILAND waxyaabaha ay ka qoreen CIRRO iyo SHARMAARKE waxba kama jiraan 100% waa FALSE.